Tino Kadewere Otungamira Lyon Kurova PSG yaNeymar
Mutambi wemuZimbabwe Tino Kadewere akwidza chikwata chake cheLyon pamusoro petafura yeFrench Lique 1.
Kadewere akamwisa chibodzwa chechikwata chake cheLynon kwapera maminetsi makumi matatu nemashanu muchikamu chekutana ndokubva chikwata chake charova PSG 1-0.
PSG chikwata chine vatambi vane mukurumbira pasi rose vanosanganisira Neymar wekuBrazil uye Killian Mbape wekuFrance. Mbape haana kutamba mutambo uyu asi Neymar ainge arimo akazobuda mushure mekukuvara.
Chibodzwa chaKadewere ndechechishanu mumakundano eFrench League 1, uye izvi zvave kureva kuti chikwata chake ndicho chete muEurope chine vatambi vatatu vanwisa zvibodzwa zvinodarika zvishanu. Toko Ekambi anwisa zvibodzwa zvinomwe uye Mephis Depay anwisa zvitanhatu.
Chikwata cheLyon chine mumwe mutambo neBrest nemusi weChitatu uye chikakunda chinenge chapedza mitambo mishanu chichisina kukundwa.
Mutsigiri wechikwata cheHarare City icho chakambotambirwa naKadewere VaStewart Mususa vanoti mutambi uyu anokwanisa kusvika kana kudarika panana Neymar ava akasakura musoro.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu VaLawrence Hwekwete vanoti vari kufara zvikuru kuti Kadewere ari kusimudzira zita renyika.
Lyon yave nemapoinzi makumi maviri nemapfumbamwe yakaenzana neLille iyo yakarovawo Bordeaux 2-1.
Muteveri wechikwata cheDynamos VaNorman Chirume vanoti Kadewere ari kusimudza mureza wenyika.
Asi mumwe mutambi weZimbabwe ari muFrench League 1 Marshall Munetsi haana kukwanisa kubatsira kununura chikwata chake cheTeims icho chakarohwa 2-1 neBrestois.
Reims iri kurwisa kuramba iri munhabvu yepamusoro iri pachinhanho chegumi nepfumbamwe mugungano rezvikwata makumi maviri.
Mumwe mutambi weZimbabwe Andy Rinomhota anotambira Reading muEnglish Championship akatamba mutambo wese apo chikwata chake chakarova QPR 1-0 ndokuenda pachinzvimbo chechishanu, mapoinzi mana pasi peNorwich iyo iri kutungamira gungano iri.
Chikwata chaKnowledge Musona AS Eupen chiri kupinda munhandare nechitatu apo chirikusangana neGenk.
Mitambo yemuSouth Africa yeligi iyo yaive yamiswa kupa nguva kufainari yeMTN irikupfungaudza utsi neChitatu zvekare.